आजबाट अवकाश लिँदै आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नयाँ आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली बन्ने निश्चित ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
आजबाट अवकाश लिँदै आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नयाँ आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली बन्ने निश्चित !
काठमाडौ, माघ २८ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल आजबाट अवकास लिँदैछन् । आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, ३ एआईजी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यात तथा १८ डीआईजीहरु मंगलबारबाट एकैपटक अवकास प्राप्त गर्दै छन् । तर अवकशको अघिल्लो दिनसम्म सरकारले भावी आईजीपी को हुने भन्ने निर्णय सरकार, सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले गएराती अबेरसम्म निर्णय लिन सकेका थिएनन् ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० मा प्रदेश १ का डीआईजी ठाकुर ज्ञवालीको नाम प्रस्ताव गरेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आईजीपी चयनको टुंगो नलागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बस्ने बैठकमा ज्ञवालीको नाम पेश गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र मूख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएसँगै सर्वेन्द्र खनालपछि डीआईजी ठाकुर नै आईजीपी बन्ने संभावना बढेर गएको छ ।
Previous वडा सदस्य र इन्जिनियर घुस लिदा लिदै पक्राउ
Next जनताको १६ करोड पैसा नोक्सान :- मेलम्ची